Awudingi usetyenziso lwe-Omegle kwifowuni yakho okanye ithebhulethi!Iwebhusayithi isebenza kakuhle kwiselula.
Hlangana nabantu ongabaziyo ngezinto onomdla kuzo!
I- Omegle(oh meg ull)yindlela entle yokudibana nabahlobo abatsha, ngelixa uziqhelanisa nokungena ekuhlaleni.Xa usebenzisa i-Omegle, udityaniswa ngokungacwangciswanga nomnye umntu ukuze uthethe umntu-nomntu.Ukuba uyakhetha, ungongeza umdla wakho kwaye uyakudityaniswa ngokungenamkhethe nomntu okhethe imidla efanayo.
Ukukunceda uhlale ukhuselekile, iincoko aziziwa ngaphandle kokuba uxelele umntu ukuba ungubani (akukhuthazwa!), kwaye unokuyeka incoko nangaliphi na ixesha.Jonga iMigqaliselo yethu yeNkonzo kunye neziKhokelo zoLuntu ukuze ufumane ulwazi oluthe kratya malunga nokwenziwa kunye nongenziwayo ekusebenziseni i-Omegle.Incoko yevidiyo ye-Omegle imodareyithwa kodwa akukho ukumodareyitha kugqibelele.Abasebenzisi banoxanduva kuphela lokuziphatha kwabo ngelixa besebenzisa i-Omegle.
Kufuneka ube 18+ okanye 13+ ngemvume yabazali kunye nokubekwa kweliso ukuze usebenzise i-Omegle.Jonga iMigqaliselo yeNkonzo ye-Omegle ngolwazi olungakumbi.Ukhuseleko lolawulo lwabazali olunokunceda abazali luyafumaneka kwaye unokufumana ulwazi oluthe kratya ku-https://www.connectsafely.org/controls/ kunye nezinye iisayithi.
Nceda ushiye i-Omegle kwaye undwendwele indawo yabantu abadala endaweni yoko ukuba yiloo nto uyifunayo, kwaye uneminyaka eyi-18 okanye ngaphezulu.
Sikunye, siya kuyenza.Unxibelelwano olukhuselekileyo naphi na apho ukhoyo
Siyavuya ukukunceda uhlale unxibelelana, unxibelelana kwaye uvakalise izimvo zakho ukuze ufezekise ngakumbi kunye.Siyazingca ngokuthenjwa zizigidi zamashishini, amashishini amancinci kunye nabantu abafana nawe.
Yakha ubudlelwane obuqinileyo boshishino, uqinise intsebenziswano, kwaye ubambe iinkomfa ezibandakanyayo kunye nevidiyo yeHD kunye nesandi ukuya kuthi ga kwi-1,000 yabathathi-nxaxheba.
Ukulungelelanisa amagumbi okuhlangana ukuhlangabezana neemfuno ezitshintshayo zabasebenzi kunye neofisi yokulinganisela kunye nokuhamba komsebenzi okude kunye nevidiyo ye-HD kunye ne-audio, ukwabelana ngomxholo ongenazintambo, kunye neebhodi zemiyalezo ezisebenzisanayo.
Phucula ilizwi lakho ngesisombululo sethu somnxeba welifu wamazwe ngamazwe ngokufowuna ngendlela ekhuselekileyo, imigca yokufowuna, iSMS, ukufowunela kwinkomfa, nokunye.
Thatha ithuba lokusebenza kweofisi ekhaya-inkomfa yevidiyo, iifowuni, iibhodi zemiyalezo kunye nezimvo kwisixhobo sakho sokusebenzisana.
Isisombululo sengxoxo sifakwe kwi-akhawunti kwaye senza lula ukuhamba komsebenzi, siphucula imveliso, kwaye siqinisekisa intsebenziswano ekhuselekileyo phakathi kwabasebenzi ngaphakathi nangaphandle kwentlangano.
Yandisa kwaye wenze lula amava akho e-Zoom ngaphezulu kwe-1,000 le-apps kunye nokudityaniswa kokucwangcisa, intsebenziswano, ukufunda, ukukhutshelwa, iCRM, kunye nokunye.
I-Zoom ibonelela ngeeWebinars zeVidiyo kunye neemveliso zeMisitho yeZoom zakutsha nje ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno zakho zomsitho.Yenza amava abonakalayo aya kuthandwa ngumntu wonke.Qalisa namhlanje ngeMisitho yokuZoom kunye neeWebinars zeVidiyo.
Sebenzisa ii-APIs zethu, ii-SDKs, iiwebhooks, kunye nokunye ukwakha ii-apps ezityebileyo, indibaniselwano eyenzelwe wena, kunye nokusebenza okutsha okuhambelana nokuhamba kwenkonzo yeZoom ekhoyo.
Iinkqubo ze-intanethi ezisingethwe yi-Server enokwenza imali ngokulula kwaye ilinganiswe kubaphulaphuli abatsha.
I-App yeNcoko yeVidiyo eyonwabeleyo
Wamkelekile kwi-ChatSpin, incoko yevidiyo engahleliweyo eyenza kube lula ukudibana nabantu abatsha kwi-intanethi.I-ChatSpin ibonelela ngezinto zokuncokola ngevidiyo ezibandakanya imaski yobuso, isini kunye nezihluzi zelizwe, incoko yabucala, nokunye.Thetha nabantu abangakhethiyo kwihlabathi liphela ngoko nangoko.Yenza abahlobo abatsha, fumana umhla, ubonise iitalente zakho, ucele ingcebiso, thetha ngezopolitiko, okanye wonwabele nje incoko yevidiyo nomntu obungekhe udibane naye.Kusimahla kwaye kulula ukuqala ukuncokola ngevidiyo kunye nokonwaba.Awunakwazi ukuba ngubani oza kudibana naye ngokulandelayo!
Ukuba ujonge ukunxulumana nabantu abatsha, incoko yevidiyo engacwangciswanga yindlela yokuhamba, kwaye iChatSpin sisithuthi esiya kukusa apho.Silungelelanise iapp yethu ukuze ufumane le nto uyifunayo-indlela yokunxibelelana nabantu abatsha.
Ngoko ke ulindele ntoni?Thetha nabantu ngokungaqhelekanga!
Iimpawu zeCam Chat zasimahla
Saqala i-Chatspin nge-mission-ukwenza kube lula ukuqala incoko engacwangciswanga nabantu ongabaziyo.
bambelela.Ayilobali elipheleleyo elo.
Ihlabathi elimanyene ngakumbi, ilizwe apho unokwenza unxibelelwano lokwenyani nabanye abantu, ekhaya nakwamanye amazwe, yeyona nto yaqhuba iqela lethu ukuba lenze usetyenziso lwethu lwevidiyo.Umnxeba ngamnye usondeza ihlabathi, usinceda ukuba sifumane iindlebe zokumamela, kwaye usinika isithuba sokuphonononga izimvo omnye komnye.
I-Chatspin yenza kube lula kuwe ukuba uncokole nabantu abangakhethiyo abakulungeleyo.Xela ukuba ungadibani nabantu abafanelekileyo.Incoko yevidiyo ye-Chatspin yengxoxo engakhethiyo yindawo yakho yokuziva uqhagamshelwe ngokunentsingiselo kwabanye, kufutshane nakude.
Ubuso ngobuso, into kaTinder yokungena kwincoko yevidiyo, ngoku isasazwa kwihlabathi liphela
I-Tinder, ngoku eyona app inkulu yehlabathi yokuba abantu bafumane imatshisi kwaye baqhagamshele nabo, yandisa enye into namhlanje ukwandisa ixesha abantu abalichitha kwi-app, kunye nonxibelelwano abanokuba nalo ngaphakathi kwayo.
Ubuso ngobuso, inqaku lokungena kuphela elasungulwa nguTinder ekuqaleni kwalo nyaka elivumela abasebenzisi ukuba bancokole ngevidiyo ngaphandle kokutshintshiselana ngolwazi lobuqu kwaye kuphela xa bejongene nekhamera, ngoku iyanda kwihlabathi liphela, mhlawumbi inyathelo elingexesha ixesha apho abantu abaninzi bengadibananga ubuso.
I-Tinder iyazi kakuhle imiba eyoyikisayo yeenkonzo zokuthandana, kwaye ke ngoku ixelayo ukuba ayililo iqela levidiyo lenkampani kodwa iqela layo lokuThemba kunye noKhuseleko elakha eli.
"Siyavuya ukwabelana ngenqaku lethu loBuso ngobuso lisasazekile kuluntu lwethu lwehlabathi emva kokufumana ingxelo eyakhayo kumalungu ethu abenokufikelela kwangoko kuyo," utshilo uRory Kozoll, iNtloko yeTrasti kunye neMveliso yoKhuseleko eTinder.“Oku kongeza kuluhlu lwethu olukhulayo lweempawu ezakhelwe kukhuseleko lwamalungu kulo lonke uhambo lwabo lokuthandana, njengoQinisekiso lweFoto, iZiko loKhuseleko kunye netekhnoloji yethu yokubona imiyalezo ekhubekisayo.”
Ii-apps zokuthandana zinokubonakala njengodidi olungaqhelekanga ukuphumelela ngexesha apho uninzi lugxile khona-nokuba kungenxa yemithetho karhulumente, okanye izindululo ezivela kwiingcali zempilo, okanye zombini - kumgama wokuhlala kunye nokuhlanganisana kumaqamza amancinci, awaziwayo, aqhelekileyo.
Kodwa eneneni kubonakala ngathi kukho ithuba apha: baba yindlela yokuba abantu banxibelelane kwaye bafumane ukudibana, ngexesha apho imivalo emininzi kunye nezinye iindawo zendibano zemveli zivaliwe, okanye ubuncinane ukufumana imisebenzi yabo eqhelekileyo ilinganiselwe kakhulu. , kwaye abantu baya kubonana kancinci ngobuqu kuzo zonke izizathu onokucinga ngazo.
Njengomzekelo, i-Tinder, ngokwezibalo ezivela kwi-AppAnnie, iqhubekile ukuhlala kwindawo ephezulu yokukhuphela usetyenziso lwendlela yokuphila kulo nyaka (ngoku ikwinombolo yesithathu kwi-iOS e-US).
Kwaye inqaku lencoko yevidiyo ligxininisa umbono wokusebenzisa usetyenziso kungekuphela nje ukubona ukuba ngubani okhoyo kwaye ngubani onokudibana naye, kodwa ukunxibelelana naba bantu.
Enye into edibanisa apha ayisiyiyo yonke i-spamfest yasimahla yabantu abangafunekiyo abasondela kuwe, njengoko benokwenza kwibar.
I-Tinder iphawula ukuba omabini amaqela kufuneka afakwe kwinqaku, kwaye kufuneka ungqamane sele ukwindawo eqhelekileyo ye-app ngaphambi kokuba incoko iqaliswe.
Kwaye nalapho unokukhetha ukungahoyi iincoko zevidiyo xa zingena, njengoko unokufowuna rhoqo.
Kwaye, ukuba ufumana abantu abothusayo bathetha izinto ezingafanelekanga kuwe kwaye bakufowunela kakhulu, kwaye awufuni kuguqula uphawu ngokupheleleyo, ungabaxela abantu ngokuskrola kwiprofayile yabo kwaye ulandele imiyalelo "yengxelo".
I-Tinder ibidlala ngeempawu zevidiyo iminyaka ukwandisa iindlela abantu abanxibelelana ngazo kwi-app, ividiyo yenye yezona zinto zidumileyo nezibandakanyayo kwiiapps okwangoku.
Ibe yintlaninge yeziphumo.I-Tinder Loops, enye indlela yokuzibonakalisa, ikhona ukusukela ngo-2022 kwaye isahamba ngamandla.Ezinye iinzame ezifana ne-Swipe Night apocalyptic interactive video show in-app yagcinwa ngo-Matshi ngenxa ye-Covid-19, nangona kutsha nje kubonakala ngathi umboniso uyavuselelwa kwezinye iimarike.
I-Callpy iya kukuvumela ukuba uqaphele ukubakhokokunxibelelana neendwendwe kwindawo yakho.
Oku kuya kuqinisekisa ukukhula kweentengiso, ukuphuculakakhulu ukuguqulwa kwendawo, kunye nokwandisaukutyelelwa ngokuphindaphindiweyo kwiindwendwe.
Iintsuku ezili-19 zeefowuni zasimahla
Fumana idemo yeentsuku ezili-19
Fumana abafowunelwabondwendwe kwimithombo evulekileyo!
Igama lokulqala nefani
Ikhonkco kwiphephaleendaba zoluntuuthungelwano
Amaphepha ewebhusayithi atyelelwe
Idatha eshiywe ngumsebenzisi inokulayishwa kwiCRMkwaye ifakwe njengefayile
Ukuqokelela idatha yeendwendwe kuqhutyelwa kungakhathaliseki ukuba kukho umcebisi.Abafowunelwa baya kungena kwiCRM (AMO okanye iMegaplan) ngokubhabha ngaphandle kokuthatha kwakho inxaxheba.
ukudibanisa ne-crm eyaziwayo
Yongeza abathengi abatsha kunye nemisebenzi kwiCRM kwinkqubo yengxoxo
yonke into ilula
free ingxoxo neendwendwe ngaphandle umda umsebenzi
Incoko yasimahla ngonaphakade
Akukho mda womsebenzi, akukho mda wexesha
Singcono kunabo sikhuphisana nabo
Incoko yasimahla esebenzayo
27 imisebenzi simahla
Izixhobo ezingama-27 zokulawula umgangatho wenkonzo
Sinika izipho ngokuthumela abahlobo
Ukusuka kwi-215 ₽ kwindawo yokusebenza yomcebisi ngenyanga
Iindlela ezi-3 ezongezelelweyo zonxibelelwano
Ncokola, iaudio, ividiyo, esweni umsebenzi
Ulawulo olungaphaya, unxibelelwano lweaudio/yevidiyo
Iintsuku ze-19 zokukhula kwentengiso, imisebenzi engama-20
UKUBA bhetyebhetye kunye nokulula kwemisebenzi kunye nezixhobo
Indlela yemveliyokucebisa kwi-intanethi
Iifowuni zasimahla ze-intanethiezivela kubatyeleli
Yenza uthethwano lwevidiyo ephilayokwindawo
Guqulela undwendwe ngokusebenzisaamaphepha, uboniseumxholo
Jongaumsebenzi weendwendwe ngexeshalokwenyani
Gqamisa kwaye uchazeizinto kwiphephalendwendwe
UCallpy uya kunikauncedo ngokuzenzekelayo kundwendweolukruqukileyo
Ukwenza ubunzulubesitayile sewijethi enezintozesazisi senkampani
Gcina ngokuzenzekelaabafowunelwa babathengi kwiCRM
Ukuqokelelwa kwabafowunelwabeendwendwezesayithi ngefom yeCallpy
Yenza amaqela abacebisiUkusasazaukuhamba kweendwendwe kubo
Joyina eyona ncoko yevidiyo idumileyo yaseRussia yokuthandana, ukunxibelelana okanye ube nexesha elimnandi lokunxulumana nabahlobo abatsha kunye nabahlobo bakudala kwinethiwekhi. Yonke imihla iWorld Wide Web ifumana ukuthandwa kwaye inikezela ngeendlela ezintsha nezinomdla zokunxibelelana kwi-Intanethi ukusuka kwihlabathi liphela, ngoncedo lwengxoxo yevidiyo kunye nezinye iinkonzo zewebhu ngokulula nangokufanelekileyo ukuqhelana nabantu abanomdla, hayi ukunxibelelana kuphela. Ingxoxo yevidiyo yoqobo yonxibelelwano kunye nokuthandana kwikhamera yeWeb chatroulette-worldwide.com unxibelelwano kwihlabathi jikelele kwi-intanethi. Njengoko amanani abantu abatsha (abasetyhini kunye namadoda) bafumana isiqingatha sabo ngokusebenzisa ividiyo ukuthandana kwingxoxo yevidiyo ngaphandle kokushiya igumbi! Impumelelo yobutyebi.
Imfihlelo yempumelelo chat-ruletka.net elula, enkosi kumacala ekhamera yewebhu ngaphandle konxibelelwano bayakwazi ukuvavanyana ngokubonakalayo kuba oku kubalulekile ukuhlola isiqingatha sesibini. Incoko yafumana ukuthandwa kakhulu ngenxa yokuba nethuba lokufumana abahlobo kwi-odolo engacwangciswanga ngokupheleleyo indlela yokudlala i-spin ibhotile, ukusuka phi, kwaye ifumene lonke igama eliqhelekileyo le-roulette yengxoxo. Iingcebiso kunye namaqhinga Yiba ngokunyaniseka ngokwabo kuba xa udibana kubomi bokwenyani kunye nabahlobo abatsha ingxoxo yevidiyo wonke umntu obuzwayo ufuna ukubona abantu bokwenyani endaweni yabalinganiswa abayintsomi kwincoko yevidiyo. Nxibelelana, fumana abahlobo, abahlobo abadala, zama ukubamba incoko nomntu kumoya omnandi, uphephe inhlamba, gcina incoko umdla kwaye fun - isitshixo yimpumelelo ukuthandana ! Yenza izincomo, nika izipho! njengakubomi bokwenyani,izipho zinikwa ukuqonda umnxebi ukuba ingqalelo abazinikeleyo kwaye ume ngaphandle kwakho phakathi amaqabane kunye nabahlobo. Regulations russian ividiyo chat coomeet memeet inika inkonzo ingxoxo ngendlela eyakhayo. Iincoko zencoko ikakhulu ngabasebenzisi abathetha isiRashiya.
Ingavumelekanga ngokungqongqo hayi ngokweenqobo ezisesikweni, hayi indlela yokuchaza izikhalazo ngayo nayiphi na indlela.Loo ncoko ngomxholo wesini kunye nabantwana ukuya kwiminyaka eyi-18.Akuvumelekanga ukubonisa amalungu angasese anyanzelekileyo.ukhuseleko Ingxoxo yevidiyo yokhuseleko ukunciphisa inani labantu abangathembekanga Isigqibo malunga nokubhaliswa okulula okungayi kuba nzima kodwa kuya kunceda isihluzo sengxoxo kunye nokuvimba abangeneleli.
IiNdawo zeNgxoxo ezigqwesileyo njenge-omegle ngo-2022-Ncokola iindlela ezizezinye zeNcoko yeVidiyo yasimahla
Sisebenzisa i-Intanethi kwimisebenzi emininzi eyahlukeneyo, kodwa esinye sezizathu eziphambili kukuhlalisana.Isidingo sokusebenzisana yimeko yomntu ezisa intuthuzelo kunye nokwaneliseka kubantu abaninzi abaqhelekileyo.Yiyo loo nto uFacebook ethandwa kakhulu.
Kodwa kukho ezinye iindawo ezininzi apho abantu banokudibana khona.Uninzi lwezi zibizwa ngokuba ziiforam okanye iibhodi zemiyalezo apho abantu bathumela khona izimvo baze babuye emva kwexesha ukubona ukuba akukho mntu uphendulileyo na.Nangona kunjalo, kukho iisayithi ezininzi eziququzelela ukwabelana ngexesha lokwenyani ezikufutshane neencoko zobuqu njengoko unokuqhagamshela kwi-intanethi.
Enye yezona ndawo zidumileyo zibizwa ngokuba yiOmegle, apho amalungu anxibelelana ngevidiyo, iaudio, okanye umbhalo nje.Yindawo entle yokuhlangana nabantu abangakhethiyo kwaye uqalise incoko nomntu ongamaziyo ngokupheleleyo.Kodwa njengeendawo ezininzi eziphambili, i-Omegle iye yagcwala kakhulu.
Apha ngezantsi uya kufumana amagumbi okuxoxa aphilayo afana ne-Omegle apho unokunxibelelana nabahlobo abatsha.
1. I-Chatliv:I-Chatliv - Eyona ndlela ikhawulezayo kunye neyona ndlela ilula yokwenza i-webcam ingxoxo nomntu ongamaziyo ovela naphi na emhlabeni.Konke okufuneka ukwenze kukufaka isini somntu, apho inkonzo iya kukhetha ngoko nangoko oyena mntu wasemzini ufanelekileyo ofuna ukudibana nomntu onjengawe.
I-Chatliv yeyona ndawo ilungileyo yengxoxo yevidiyo kwaye yenye yezona ndawo zidumileyo zengxoxo yevidiyo.Amawaka eengxoxo ahlala ekwi-Intanethi evela kwihlabathi liphela kumagumbi encoko akwi-Intanethi.
2. I-CooMeet:I-Coomeet yingxoxo yevidiyo yolwimi lwaseRashiya kunye nesayithi yokuthandana (i-roulette).enye yeyona ndlela ilungileyo ye-chatroulette kunye ne-omegle, kwi-coomeet ungaqala ividiyo yokuthandana nabantu ongabaziyo abavela kwihlabathi liphela.UCoomeet usebenza kumgaqo weroulette, okuthetha ukuba awusoze wazi ukuba uza kuncokola nabani.ukuba uyakruquka ke ezi ntlobo zencoko zinokukuzisela ulonwabo.
Iimpawu zeCoomeet:1. Hlala unxibelelana nomntu ongamaziyo2. Incoko yevidiyo yasimahla3. Yongeza abantu abangaqhelekanga kuluhlu lwabahlobo bakho4. Hlala unxibelelana nomntu ongamaziyo omthandayo5. Thumela izipho kunye nerozi kumntu wakho omthandayo6. Fumana i amaqabane angcono
3. I-TinyChat:Namhlanje, i-TinyChat yeyona nkonzo inkulu yelizwi kunye nevidiyo kwi-Intanethi.Inkampani iqhayisa ukuba abasebenzisi bavelisa imizuzu ye-5 yezigidi ze-airtime ngosuku.Apho uya kufumana amawaka eencoko, nokuba ezinye zazo zaqalwa ngabantu kwingingqi yakho, kwaye ukuba awuwufumani umxholo owufunayo, ungazenzela owakho.
I-TinyChat ivumela ukuya kuthi ga kwiividiyo ze-12 zemijelo kwigumbi ngalinye kwaye isebenzisa i-API apho abasebenzisi banokusasaza ividiyo ephilayo ukusuka kwimiboniso ebanjwe kwinkonzo kwaye ayifanelekanga.Abantu badibana ukuze banxibelelane ngemakrofoni, ividiyo okanye umyalezo okhawulezileyo.
4. Omegle Webcam:Omegle Webcam yeyona ethandwa kakhulu ukuthandana kunye chatting webcam. Ngaphezulu kwe-20.000.000 abasebenzisi ababhalisiweyo. Incoko yasimahla yeRoulette. iindawo ezifana omegle.I-Omegle Webcam yenye indlela yasimahla yokuncokola ngevidiyo nge-Omegle, ngokungaziwa thetha nabantu ongabaziyo usebenzisa ikhamera yewebhu kwaye udibane nabantu abatsha ngoko nangoko. Incoko yevidiyo kunye nabasebenzisi abangakhethiyo, yenza abahlobo abatsha. Yiba nonxibelelwano lwentlalo kunye nabathandi be-omegle.I-Omegle.webcam luhlobo lwendawo yokuncokola.
5. I-Bazoocam:I-Bazoocam yenye indawo ye-web yengxoxo eqhelekileyo ethotywe kakhulu ukuyigcina icocekile.Njengezinye iisayithi ezikhankanyiweyo, ngempazamo uye wahlala komnye umntu.Ukuba awukuthandi okubonayo, ngoko ucofa iqhosha elithi "tsiba" kwaye udlulele komnye umntu.
I-Bazoocam ibonelela ngemidlalo emininzi yabadlali abaninzi onokuthi uyijoyine njengeeqhekeza zomkhenkce okanye ukuba uyakruquka ukuthetha ngawe.Ukuba unesithukuthezi, bathembisa ukwenza into engaqhelekanga, kodwa bakulumkise ngokugcina iimpahla zakho uzinxibile.Zama ukunxiba isuti okanye ukudlala umculo owuthandayo.Heck, dlala isiginci okanye i-kazoo kwaye uya kufumana abantu abaninzi onokuthetha nabo.
6. I-FaceFlow:I-FaceFlow - Aba bafana bathatha imidiya yoluntu ukuya kwinqanaba elilandelayo ngokuvumela abasebenzisi ukuba babe neengxoxo zevidiyo ezinokuthi zihlale kubantu abathathu ngexesha.I-FaceFlow ibonelela "ngencoko yevidiyo yasimahla kunye nenkomfa yevidiyo kunye nabahlobo, kanye kwibhrawuza yakho yewebhu," kodwa unokuthetha nabantu ongabaziyo.Abasebenzisi ngoku banokwenza iprofayile enokuphendwa kwaye banokwabelana ngeefoto zabo abazithandayo kunye neevidiyo kuYouTube.
Ngaphandle nje enye inkonzo web ingxoxo, le sayithi ngakumbi ngokuhambelana iinkonzo ezinkulu ukuba Skype kufuneka anikele.Inika umbhalo kunye neencoko zevidiyo zexesha elinye.Kwaye ukwenza izinto zibe nomdla ngakumbi, iFaceFlow ikhuphe umdlalo wabadlali abaninzi obizwa ngokuba yiFlappy obonakala unzima kakhulu.
7. I-ChatRandom:I-Chatrandom ineenjongo ezinkulu, enye yazo kukuba ibe ligama elifanayo ne-Facebook, Twitter okanye i-YouTube.Le yenye indawo webcam edibanisa umsebenzisi nomnye umsebenzisi random.Kwabonakala njengenye indlela yeChatroulette kuba isiza satshintsha imithetho rhoqo.
Ukufezekisa le njongo, badibanisa abantu abavela kwihlabathi lonke kwaye bahlala besongeza amazwe amatsha kunye neelwimi.Unokukhetha ukusebenzisana ngokungenamkhethe nomnye umntu, neqela, okanye namantombazana.Unokukhetha ukhetho lokuthetha ngevidiyo, kunye nabasebenzisi abathandanayo, okanye ngolwimi oluthile.Bakwangeza ikhamera yewebhu eyongezelelweyo kunye nezinye iinkonzo ukuhlangabezana nokulindelwe ngabasebenzisi.
8. I-Chatroulette:I-Chatroulette yinkonzo yengxoxo esekelwe kwi-webcam enendlela ekhethekileyo yokudibanisa abasebenzisi kunye nabantu abangaziwayo.Kufuneka kufane nokudlala iroulette yaseRashiya, endaweni yokuba udubule ngompu, uthetha ngomlomo ngemiyalezo echwetheziweyo kunye/okanye nekhamera yewebhu, kwaye ukuba uthetha okanye wenze into angayithandiyo iqabane lakho, bayayishiya incoko ( "bulala"). incoko).
Yenziwe ngo-2022 ngumntwana oneminyaka eli-17 ubudala owazisa indawo kwigumbi lakhe lokulala kwindlu yomzali wakhe.Ngaphandle kweentengiso, le ndawo ikhule yaya kutsho ngobukhulu ngomlomo.Emva kweminyaka yovavanyo kunye nempazamo, uye wafikelela kwinqanaba apho anokucoca ngokufanelekileyo ukuziphatha okungafanelekanga.
Abasebenzisi kufuneka babhalise kwaye bavumelane nemigaqo yenkonzo, kwaye abaphula umthetho baya kuhluzwa ngababonisi besayithi. Uninzi lwabasebenzisi bangaphantsi kwe-30 kwaye kukho amadoda amaninzi kunabasetyhini. Ubuncinci ilinganiswe ngu-R.
Imithetho yokuhlangana nabantu ongabaziyo kwi-Intanethi1. Musa ukwenza okanye ukuthetha nantoni na onokukhalaza ngayo kamva. Incoko yakho, umbhalo, iaudio okanye ividiyo inokurekhodwa ngokulula kwaye isetyenziswe ngokuchasene nawe.2. Ukuba uyaxhatshazwa, yixele kwaye udwelise umsebenzisi.Yenza okufanayo xa ubona umntu exhatshazwa.3. Musa ukwabelana ngeenkcukacha zakho nabani na.4. Abarhwaphilizi abachwepheshile baya kuxhwarha ngolwazi lwakho.5. Musa ukushiya nantoni na yobuqu kwisakhelo sengxoxo yevidiyo, enjengeefoto zentsapho okanye naziphi na ezinye iinkcukacha ezinokusetyenziswa ngumhlali ukuze azilandele.6. Fundisa usapho lwakho indlela yokhuseleko xa usebenzisa nayiphi na yezi nkonzo.Ngelixa uninzi lwazo lumodareyithwa kakhulu, kusekho amarhamncwa akrelekrele phaya.7. Yonwaba... yiloo nto ke.